के तपाईलाई निन्द्रा लाग्दैन ? त्यसो भने यी टिप्स अपनाउनुहोस तुरुन्तै निन्द्रा आउनेछ – नेपाली सूर्य
के तपाईलाई निन्द्रा लाग्दैन ? त्यसो भने यी टिप्स अपनाउनुहोस तुरुन्तै निन्द्रा आउनेछ
January 17, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on के तपाईलाई निन्द्रा लाग्दैन ? त्यसो भने यी टिप्स अपनाउनुहोस तुरुन्तै निन्द्रा आउनेछ
ताजा खबर :- अधिक वयस्क यूवाहरू सहि निन्द्रा लिन सक्दैनन् । धेरै मानिसहरु अफिसको अनियमित समयका कारण निन्द्रा पूरा लिन सक्दैनन् । ६ देखि ८ घण्टाको सहि निन्द्रा नलिनाले धेरै किसिमको स्वास्थ्य समस्याहरु जस्तै:- इम्यून सिस्टम कमजोर हुनु, पाचन प्रणालीमा समस्या, मुटु रोग, डिप्रेशन, वजन बढ्नु र आँखाको समस्या हुने गर्छ । चिकित्सकको भनाइ अनुसार, यस्ता समस्याबाट बँच्नको लागि यी उपाय द्वारा तपाई राम्रो निन्द्रा लिन सक्नुहुन्छ ।
दिनहुँ एक्सरसाइज:- धेरै रिसर्चका अनुसार यो कुरा सावित भैसकेको छ कि जून मानिसहरु दिनहुँ एक्सरसाइज गर्छन् । उनीहरुको निन्द्रा राम्रो हुने र उनीहरुको सुत्ने एक निश्चित समय बन्छ ।
अनिश्चित समयमा:- अनिश्चित समयमा सुत्नु हुँदैन । यसो गर्नाले तपाईको निन्द्रामा समस्या हुन सक्छ ।
दिनको समय:- दिउँसोको समयमा १०-१५ मिनेट सुत्दा तपाईको लागि फाइदायुक्त हुन सक्छ । यसले तपाई अधिक एनर्जेटि‍क महसूस गर्नुहुन्छ।
हेभी डिनर :- यदी तपाई चाँडो र कम खानुहुन्छ भने तपाईको लागि राम्रो हुन्छ । राम्रो निन्द्राको लागि तपाई रति ढिलो र धेरै खाना खानु हुँदैन । राति हेभी खाना खाँदा एसिडिटी, ब्लोटिंग र अन्य समस्या हुन् सक्छ । जसले तपाईको ठिक निन्द्रा लिन कठिनाई हुन्छ ।
म्याग्नेशियम युक्त खाना:- राम्रो निन्द्रा र मस्तिष्क सहि सँग काम गर्न मस्तिष्कलाई म्यागनेशियमको आवश्यकता पर्दछ । तपाई हरियो सागपात, केरा, पम्किन सिड्स, फ्ल्याससिड्स, बदाम र सन्फ्लोवर सिड्स जस्ता खानालाई तपाई डाइटमा समावेश गर्न सक्नु हुन्छ ।
ग्याजेट्सबाट टाढा रहनुहोस्:- एक अध्ययनका अनुसार, ग्याजेट्सबाट निस्कने ब्लू लाइट मेलाटोनिन नामक हर्मोन रिलिज गर्छ । जसले निन्द्रालाई निकै समस्या पार्छ । सुत्नु भन्दा १ घण्टा पहिले ग्याजेट्स बन्द गर्नु पर्छ।
सुत्नु भन्दा २ घण्टा अघि सम्म चिया वा कफी सेवन गर्नु हुँदैन । यसले निन्द्रा डिस्टर्ब हुन्छ ।
सुत्नु भन्दा पहिले हल्का मनतातो पानीले नुहाउनुहोस् । किताब पढ्नुहोस, हल्का गीत सुन्नुहोस् र सुत्ने समय निश्चित गर्नुहोस् । यसले राम्रो निन्द्रा लाग्छ ।
निन्द्राको लागि कोठा एकदमै अध्याँरो गर्नुहोस् । कोठामा कतैबाट पनि प्रकाश आउन दिनुहुँदैन् । यसो गर्दा पनि निन्द्रा पनि पूरा हुन्छ ।
साभार : etajakhabar
तपाईलाई यो पोस्ट कस्तो लाग्यो ? अवश्य कमेन्टमा लेख्नुहोला, मनपरे जानकारी शेयर गर्नु होला । थप जानकारीका लागि हाम्रो वेब साइटमा जानुहोस् धन्यबाद । https://nepalisurya.com
महिलाद्वारा छुरा प्रहार गरी युवकको हत्या,कारण थाहा पाएपछि जेलबाट मुक्त गरिदियो प्रहरीले
अान्दाेलन उग्र: क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा आगो दन्काइयाे, ट्राफिक पोस्ट पनि खरानी
December 16, 2017 December 16, 2017 Nepali Surya
December 15, 2017 Nepali Surya